Iindaba - Iindaba ezimnandi! Inkampani ye-3 yocingo lebhendi yenziwe ukuba isebenze ngempumelelo!
Ikhoyili yentsimbi kunye nephepha
Iindaba ezimnandi! Inkampani ye-3 yocingo lebhendi yenziwe ukuba isebenze ngempumelelo!
Nge-30 ka-Epreli, i-2018, emva kweenyanga ezininzi zokulungisa ingxaki, inkampani esanda kuthengwa engu-3 yocingo lwe-mechine yafakwa ngempumelelo, kwaye umongameli wenkampani ezinye iinkokheli zathatha inxaxheba kwimveliso yesiqwenga sokuqala socingo.
Izixhobo zingasetyenziselwa umgangatho ophezulu wokudibanisa umnqamlezo wentsimbi eshushu eshushu eshushu. -ukugcina kunye nomgangatho ophezulu. Izixhobo zilawulwa yikhompyuter ehlelwe yi-PLC. Ububanzi nokushiya izithuba zentsimbi kunokulungiswa ngokwemfuno. Umnatha onezithuba ezahlukeneyo zegridi zinokudityaniswa ngokuzenzekelayo. Ngendlela yokulawula uhlobo lokuchukumisa, imeko yokusebenza kwesixhobo inokujongwa ngexesha lokwenyani ngescreen ukuqinisekisa ukuba iimveliso zikulungele oko.
Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, iiodolo ezivela kubathengi abaziintloko ziye zalandelana. Ukuveliswa kwe-No.3 yocingo lwe-mechine kuya kuyonyusa kakhulu imveliso yenkampani, kubonelele ngenkxaso eyomeleleyo yokuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye nokuphucula ixesha elifanelekileyo lokuhanjiswa kwe-odolo, kunye nokunceda ukukhula ngokukhawuleza kwamashishini.
Inkampani yongeze imigca emibini ezenzekelayo yemveliso kule minyaka mibini idlulileyo, kwaye imveliso yemigca yentsimbi e-welding inyuke kakhulu. Inkampani ifumene isatifikethi se-ACRS sase-Australia iminyaka emine. Inani leodolo zasekhaya nakwamanye amazwe liyonyuka nonyaka. Kuphuhliso lwexesha elizayo, inkampani yethu icwangcisa ukongeza izixhobo kwixesha elizayo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya.
Ixesha Post: Sep-18-2020
Umzi-mveliso weTuanbo, kwiJinghai County, eTianjin, China